Irayisi pancake, iresiphi yokusebenzisa ithuba elisele leerayisi | Ukupheka kweKhitshi
UIrene Gil | | Cuisine yesiNtu, Amahashe d'oeuvres
Khange yenzeke kuwe amaxesha amaninzi owenzayo irayisi emhlophe kwaye uhlala unento eseleyo. Ewe, namhlanje ndikunika umbono olungileyo wokuba usebenzise eli lilayisi limhlophe, uzenzele iikeyiki ezimnandi zerayisi.
Ezi Iikeyiki zerayisi Ayizizo ezomileyo eziqhelekileyo ezithengiswa ezivenkileni, ezi pancake zifana nohlobo lwedonut apho irayisi isisithako esifunekayo. Zomileyo kwaye ndinokuqinisekisa ukuba uya kuzithanda. Kusapho lwam kuyinto eqhelekileyo, kuba ndiyakhumbula ukuba umakhulu wam wayesenzela ukutya okulula.
Intsalela yerayisi emhlophe.
1 okanye 2 amaqanda.
½ iglasi yobisi.
Ioyile yomnquma yokuqhotsa.
Ukwenza leresiphi yeekeyiki zerayisi, kufuneka sifumane kuphela isithako senkwenkwezi, oko kukuthi, irayisi. Ubungakanani bezithako buya kuxhomekeka kwinani lerayisi esinalo, ke uya kwandisa okanye unciphise ezi zithako ngokwenxalenye yerayisi.
Kwisitya, siza kubeka irayisi eseleyo kwaye siyigungqise kancinci ukuze iinkozo zerayisi zikhululeke kwaye zingangxameli. Emva koko siya kongeza isiqingatha seglasi yobisi, iqanda (okanye ezimbini ukuba yirayisi eninzi), ityuwa kunye neparsley, kwaye siza kuvuselela yonke into kakuhle ukuze izithako zixutywe.
Okulandelayo, siya kuwubetha umxube odlulileyo kwaye siya kongeza umgubo (lowo uvumayo) de sifumane intlama engenabunzima kakhulu okanye engamanzi kakhulu. Kwanele ukwenza iibhola ukuze irayisi ingaphumi.
Okokugqibela, siza kubeka ipani ngeoyile eshushu kwaye ngoncedo lweepuni ezimbini, siza kwenza iikeyiki zerayisi ngokuzifaka kwioyile ukuze uzifake.
Ndiyathemba ukuba uyayonwabela leresiphi yesiko yeekeyiki zerayisi ezenziwe ngumakhulu wam.
Xa, sobabini ngaphandle kunye nasekhaya, kwaye sifuna izimuncumuncu, sihlala sicinga ngazo zonke izinto ezinokuthintelwa. Into engenzekiyo nge Iikeyiki zerayisi (ayizudidiswa irayisi omelette). Ukukhanya, impilo kunye nokuhamba nayo yonke into. Yintoni enye esinokuyicela? Namhlanje siza kucacisa onke amathandabuzo okuba babangqongile. Ngaba ucinga ukuba uyazi yonke into? Fumanisa ukuba ingaba kunjalo ngenene na!
1 Ipenikeyiki erayisi emdaka
2 Irayisi okanye ingqolowa yepanekuku?
3 Ngaba iirayisi ziyatyeba?
4 Ngaba iikeyiki zerayisi zinearsenic?
5 IHacendado kunye neBicentury iikeyiki zerayisi
6 Uyenza njani ikhekhe leerayisi
6.1 Ikhukhumele irayisi iikeyiki
6.2 Iikeyiki ezikhawulezayo zerayisi
Ipenikeyiki erayisi emdaka
Xa sithetha ngazo Ipenikeyiki erayisi emdaka, Sele sicinga ngokutya. Ziyindlela efanelekileyo yezo yure zasekuseni okanye zasemva kwemini, xa isisu sisicela into enencasa kodwa asinakuthatha iikhalori ezininzi. Ewe akulungile ukucinga ukuba siza kuphelela ekusebenziseni ukutya xa sitya ukutya okuthile.
Iikeyiki zerayisi zinokuchazwa njengesisombululo esikhawulezayo xa silambile kodwa asifuni kufaka izandla zethu kwinto emnandi. bucala ngasekhohlo uhlobo lwepancake Isinika ukwanelisa indlala yethu, sithatha ukutya okunesondlo kunye neekhalori eziphantsi. Ngendlela efanayo, bayayazi indlela yokuzihlaziya kwakhona iibhetri zethu kwimizuzu nje embalwa, kuba nazo zenziwe ngeicarbohydrate. Kuya kufuneka sibatshise ngezemidlalo, ke ukuba awuwenzi umthambo, thatha ingqalelo kwaye unciphise ukutya kwakho kwe-carbohydrate. Ukulungiselela nje uxabiso oluncinci, ayizukuyitshabalalisa intsomi enkulu kunye nenyani ekhoyo phakathi kwepenike ezigcweleyo. Ewe kunjalo, akufuneki bathathe indawo yesinye sezona zidlo ziphambili.
Irayisi okanye ingqolowa yepanekuku?
Siphawule ukuba irayisi kunye neenkozo zizonke ziphantse zabaluleka ekuseni okanye phakathi kwemini, kodwa, Zeziphi ezilungileyo, irayisi okanye iikeyiki zombona?. Apha sele sinengxaki enkulu, kodwa akukho nto ayinakusonjululwa ngokuphawula kuzo zombini iindlela onokukhetha kuzo. Kufuneka kuthiwe kuzo zombini iindlela zokuzilungiselela, zinokutya okuziinkozo njengezona zithako ziphambili.
Le yinto ekufuneka uyikhumbule xa ubathenga. Ayizizo zonke iimveliso ezisebenza ngendlela efanayo kwaye ngamanye amaxesha, sifumanisa ukuba indala kunerayisi okanye umbona, zine-oyile kajongilanga okanye i-soy lecithin, phakathi kwezinye izithako. Zombini kwimeko zerayisi kunye neekeyiki zombona, banexabiso elifanayo.
Iikeyiki zerayisi: Zinezinye Iikhalori ezingama-30 kwisiqwenga ngasinye. Ke, xa sithetha nge-100 yeegramu zazo, sijongana ne-381 kcal. IiCarbohydrate zijikeleze i-78 g, kwezo 100 gr. Iiproteni ziyi-8,5g kunye neetyuwa i-0,02g.
Iipancakes zommbila: Iipancake zombona nazo zinekhalori ezifanayo nge-100 gr., Oko kukuthi, i-381. IiCarbohydrate zijikeleze i-83g, iiproteni i-7g kunye netyuwa kule meko iphezulu kancinci, i-1,4g.
Njengoko sibona, umahluko uphantsi kakhulu, abantu abaninzi bakhetha umbona. Kwiimeko ezininzi, xa sifuna ukubulala unxunguphalo oluveliswa kukungatyi yonke into esiyinqwenelayo, iikeyiki zombona zibulala yonke inkanuko. Banobunewunewu obuhle ngakumbi, obusikhumbuza iipopcorn, kodwa njengayo yonke into, iya kuhlala ikukungcamla.
Ngaba iirayisi ziyatyeba?
Njengoko sibonile kwinqanaba elidlulileyo, ngekhe utsho ukuba iikeyiki zerayisi ziyatyeba. Ngoku, ayisiyiyo yonke into ekufuneka ithathiwe ngokwexabiso lobuso. Nangona nganye inokuthi ithwale iikhalori ezingama-29 okanye ezingama-30, singazithatha ezimbalwa, phakathi kwasekuseni nasemva kwemini. Ukuba sithatha malunga ne-100 gram, emva koko siya kube sithetha ngesixa esigqithisileyo seekhalori.
Ewe, azihlali zithathwa zodwa, ke sinokubakhapha bobabini ngokufakwa kunye nezilayi ezimbalwa zeturkey okanye inkukhu yenkukhu. Ngokunjalo, nesiqwenga setshizi esitsha 0% yeoyile, idityaniswa ngokugqibeleleyo kunye nayo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba xa sithetha ngeekeyiki zerayisi, sizenza ezilula, ezo zingenazo izongezo ezingaphezulu kwaye kuphela irayisi ngokwayo eya kuba sisiseko sesiseko. Kutheni le nto siyithetha le nto? Zininzi iindidi zepancakes. Iitshokholethi, iyogathi okanye i-caramel ziyonwabisa, kodwa kuya kufuneka ukhumbule ukuba iikhalori zazo ziyenyuka. Ke, okwangoku, iikeyiki ezimbalwa ezisisiseko zerayisi azityebisi.
Ngaba iikeyiki zerayisi zinearsenic?
Kutshanje kuye kwaqhamka iindaba ezothusa abantu. ESweden, kwacetyiswa ukuba bonke abantwana ababeneminyaka emi-6 ubudala nangaphantsi bangawatyi amakhekhe erayisi okanye irayisi ngokwayo. Kwathiwa kuyo yonke into abayityayo batya i-arsenic. Kubonakala ngathi i-WHO iqinisekisa ukuba zombini irayisi kunye neemveliso ezenziwe ngayo zinamanqanaba aphezulu.
Ewe, ukuze kubekho iingxaki zempilo, kuya kufuneka sizisebenzise kakhulu. Njengomgaqo ngokubanzi nakwizixa ezilinganiselweyo akufuneki ukuba yingxaki yezempilo. Ukuba ufuna ukuqhubeka nokuthatha irayisi emhlophe, umzekelo, ngokumane ubilisa, uya kube sele unciphisa amanqanaba e-arsenic.
IHacendado kunye neBicentury iikeyiki zerayisi
Ngalo lonke ixesha sisiya kwivenkile enkulu, akukho nto ithengwayo ingenamaqebengwane erayisi. Ewe kunjalo, asisoloko sifezekisa iziphumo ezigqibeleleyo ngokubhekisele kwincasa. Xa ii-brand zahluka, mhlawumbi kunye nezithako zazo kwaye, incasa eya kuthi ishiye la manzi.
Iikhekhe zerayisi zeHacendadoUphawu lweHacendado lunokufumaneka eMercadona. Enye yeendawo ezisisiseko zokufumana iimveliso ezininzi ngamaxabiso afanelekileyo. Kule meko iipancake ziza kwiiphakheji ezizodwa. Ngale ndlela baba lukhetho olukhulu xa sifuna ukutya iipanekuku ezimbalwa kwaye asikho ekhaya. Ixabiso lamandla kwiigram ezili-100 ngama-368 kcal. Unokuzama iirayisi ezidityaniswe ne-oats kwaye uyakubona ukuba zilunge kangakanani.
Iipancakes zeBicentury: Iipancakes zeBicentury zibiza kakhulu kuneMercadona. Ewe kunjalo, ukuba ufuna ukukhetha kwiintlobo ngeentlobo zeencasa, ngaphandle kwezidlo ezibalulekileyo okanye iikhalori, mhlawumbi lolona khetho lwakho lubalaseleyo. Ungazifumana kwiitshokholethi ezahlukeneyo, iyogathi okanye i-caramel phakathi kwabanye.
Uyenza njani ikhekhe leerayisi
Ukuba ufuna yenza iikeyiki zakho okanye utyiwaUngayifumana ekhaya kwaye ngendlela elula. Kuya kufuneka ube nomonde omncinci, kodwa ke, awunzima konke konke. Into esiyithandayo xa siqala ukupheka.
Ikhukhumele irayisi iikeyiki
Ukwenza i-rice pancake yethu ekhukhumeleyo kwaye iyothuse usapho ngayo, kufuneka:
Kuqala kufuneka sipheke irayisi ngamanzi. Ixabiso liya kuhlala lihluka ngokuxhomekeke kwisixa esifuna ukusifumana. Ukuba irayisi ihamba kakhulu kuwe, ingcono kakhulu, yile nto siyifunayo. Kungenxa yoko le nto siza kuyishiya emlilweni ngaphezulu kwemizuzu engama-20. Xa sigqibile, kuya kufuneka siyikhuphe kakuhle kwaye siyiphose kwitreyi ye-oveni.
Eyona nto intle kukuba i-oveni ishushu ngaphambili, ukusukela ngale ndlela, kufuneka sinciphise ubushushu ukwenza irayisi. Malunga nama-70-80º iyakuba ngaphezulu kunokwanela. Siza kuyishiya malunga nemizuzu engama-45. Nangona siza kuhlala silindile kuba i-oveni nganye lilizwe. Into esifuna ukuyiphumeza kukuba ayityiswanga kakhulu. Emva kwexesha, siya kuyongeza kwipani yokutshiza kunye neoyile. Siza kuyigalela kwiipuni kwaye sibone ukuba ikhula njani. Ngoku kufuneka siyisuse kwaye siyibeke kwi-napkin okanye iphepha lokufunxa ukuze sisuse ioyile kangangoko. Okokugqibela ungongeza ityuwa okanye iswekile ngokokhetho lwakho kwaye kunjalo.
Iikeyiki ezikhawulezayo zerayisi
Kule meko, kufuneka sipheke irayisi. Xa yomile kwaphela kwaye idlulile kuyo, iya kuba kwinqanaba elifanelekileyo lokudala iipancake zethu. Ngoku lixesha lokuba uyipholise. Songeza imbewu kwaye simise iikeyiki zethu. Ngoku kukho kuphela uzibeke kwimicrowave okwemizuzu embalwa, Ujikeleze kwaye ujikeleze. Uya kubona ukuba bagqibelele kangakanani!
Kwaye, ukhe wazama irayisi omelette? Suku? Ewe, bhala le recipe:
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Iiresiphi zehlabathi » Cuisine yesiNtu » Iikeyiki zerayisi